isbar bardhig ku saabsan Rashford & Rooney & Ronaldo 250 kulan oo Man Utd ah.
Home Horyaalka Ingiriiska isbar bardhig ku saabsan Rashford & Rooney & Ronaldo 250 kulan oo...
Marcus Rashford wuxuu ku soo barbaaray kooxda manchester united waqtigaan waa mid kamid aj weeraryahanada ugu fiican Premier League ee Manchester United, isagoo aan laga fileynin inuu isbarbar dhigo Cristiano Ronaldo iyo Wayne Rooney.
Ka dib markii uu United kaga soo biiray Sporting Lisbon 2003, Ronaldo waxa uu kusoo baxay mid dar dar badan xoog leh ilaa ka hor inta uusan dhameystirin 80 milyan ginni oo uu ugu dhaqaaqay Real Madrid lix sano ka dib.
Rooney wuxuu yimid Old Trafford 2004 wuxuuna 13 sano oo cajiib ah ku qaatay man united isagoo ugu dambeyntiina noqday gooldhaliyahooda ugu fiican.
Red Devils ayaa si aan qarsoodi lahayn ugu dhibtooday inay bedelaan labadaas hibood ee gaarka ah sanadihii la soo dhaafay laakiin Rashford ayaa u muuqda inuu ugu dambeyntii buuxin doono booskaas.
Courtesy of Transfermarkt, waxay isbarbar dhig ku sameysay Rashford 250kii kulan ee ugu horeysay ee United iyo Ronaldo iyo Rooney 250kii kulan ee ugu horeysay ee United ay soo muuqdeen si loo aragno cidda ka soo baxda.
Kulamada uu saftay waa : 250 kulan
Kulamada lagu soo bilaabay waa : 178
Kulamada uu keedka kasoo kacay : 72
goolasha uu dhaliyey waa: 83
Caawinta uu sameeyey waa : 51
Waxa uu dhaliyey: 8 sideed Rigoore
Daqiiqadaha uu goolasha ku dhaliyey: 199.6
Daqiiqada uu rigooroyinka ku dhaliyey waa: 220.9
Daqiiqada uu caawin iyo gool isugu jira sameeyey waa: 123.6
Kulamada uu ciyaaray waa: 250
Kulamada lagu soo bilaabay waa: 205
Kulamada uu keedka kusoo biloowday waa: 45 Goolasha uu dhaliyey waa: 99
Caawinta uu sameyey waa: 60 Rigoorayasha uu dhaliyey waa: 13
Daqiiqadaha uu goolasha ku dhaliyey waa: 190.3
Daqiiqadaha uu rigoorada ku helay waa: 219.1
Daqiiqadaha iyo caawinta La isku daro waa : 118.5
Kulamada uu saftay : 250
Kulamada lagu soo bilaabay waa: 222
Kulamada keedka la dhigay waa: 28 Goolasha uu dhaliyey waa: 104 Caawinta uu sameyey waa: 58 Rigooroyinka uu dhaliey: 1
Daqiiqadaha uu gool ku dhaliyey: 192.8
Daqiiqadaha rigooroyinka loogu dhigay: 194.6
Cawaainta iyo goolasha uu dhaliyey:123.7
Previous articleGuriga Carlo Ancelotti oo la bartilmaameedsaday kadib tuugo usoo dhacday iyo shaqsiyaad kale oo hore loo dhacay.
Next articleLeicester City oo 3-1 ku Xasuuqday Liverpool kana tirtirtay Rajada Horyaalka